Nepal Samaya | अनिश्चितताको भुँमरीमा फसिरहेको छ अफगानिस्तान
आसिफ खान तुर्क | काठमाडौं, आइतबार, कार्तिक २१, २०७८
आइतबार, कार्तिक २१, २०७८, काठमाडौं
यसरी केटीहरुलाई स्कुल जान वञ्चित गरिएपछि उनीहरुको भविष्य अन्धकार हुने निश्चित छ। स्वास्थ्य, उद्योगधन्दालगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रको स्थिति पनि नाजुक छ।
तालिवानलाई अझै उन्माद छ, सरकार चलाउने कुनै तौरतरिका छैन। सरकारी ढुकुटी गोलिगठ्ठा र बन्दुकमा खर्च भएको छ। केही काम गर्छु भन्नका लागि पनि कि त सरकारी ढुकुटीमा पैसा हुनुपर्छ, कि त विदेशी निकायले पत्याउनुपर्छ। यी दुवै अवस्था अफगानिस्तानमा छैन।
त्यहाँ अहिले खाद्यान्न संकट गहिरो बन्दै गएको छ। अफगानिस्तानका करिब १ करोड मानिस चरम भोकमरीको समस्यामा रहेको अनुमान छ। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, त्यहाँका विपन्न वर्ग मात्र होइन, मध्यम वर्गले पनि खाद्य संकटको सामना गरिरहेका छन्।
केही दिनअघि एकजना अफगानी साथीसँग कुरा भएको थियो। मैले त्यहाँको के छ खबर? भनी सोधेको थिएँ। अन्यमनस्क भावमा उनले भने– के खबर हुनु र? जिन्दगी अनिश्चितताको भुँमरीमा फसिरहेको छ। त्यसपछि मलाई उनीसँग धेरै लामो कुराकानी गर्ने 'मुड' चलेन। मैले मनमनै प्रार्थना गरेँ–अफगानी नागरिकले यो दुर्दिनबाट छिट्टै मुक्ति पाऊन्।
प्रकाशित: November 7, 2021 | 22:35:00 काठमाडौं, आइतबार, कार्तिक २१, २०७८
तुर्क पाकिस्तानी पत्रकार हुन्।
काठमाडौं, आइतबार, कार्तिक २१, २०७८